Fanodinkodinam-bola, fivarotana tany, karama: nohadihadin’ny polisy ny ben’ny Tanàna Ratsiraka Elysé | NewsMada
Fanodinkodinam-bola, fivarotana tany, karama: nohadihadin’ny polisy ny ben’ny Tanàna Ratsiraka Elysé
Ho lasa lavitra ny raharaha ? Nohadihadin’ny polisy tao amin’ny birao fiasany ao amin’ny lapan’ny Tanànan’i Toamasina ny ben’ny Tanàna, Ratsiraka Elysé, omaly. Anisan’ny namotorana azy ny resabola sy ny momba ny tanim-panjakana ary koa ny karaman’ny mpiasa.
Anisan’ny iahiahiana ity mpitantana ao Toamasina ity ny momba ny fanodikodinam-bola voatokana ho an’ny solika, mitentina 375 tapitrisa Ar. Eo koa ny fivarotana
tanim-panjakana etsy amin’ny cité Duplex. Nivarotra izany taminy ny ben’ny Tanàna lefitra voalohany Dihn Vanh Ricky sady nomena fahazoan-dalana hivarotra ny tanin’ny kaominina, tsy mifanaraka amin’ny vidin’ny tanim-panjakana. Manampy ireo ny momba ny karaman’ny mpiasa, mivoaka avy ao amin’ny tahirim-bolam-panjakana nefa tsy voarain’ny mpiasa misoratra amin’ny antontan-taratasim-bola akory. Naharitra ora efatra ny faharetan’ny famotorana nataon’ny polisy misahana ny heloka ara-bola an-dRatsiraka Elysé. Efatra ireo nanao ny fanadihadiana azy ka nahitana ofisie iray, inspekitera roa ary brigadie iray. Teo koa ny mpisolovava ny ben’ny Tanàna.
Mametraka ahiahy ny maro…
Nanamarika izao fanadihadiana izao ny lalan-kafa nivoahan’ireo polisy efa-dahy sy ny mpisolovava an-dRatsiraka Elysé. Nivoaka amin’ny varavarana hafa, fandehanan’ny ben’ny Tanàna rehefa amin’ny vanim-potoana sarotra na misy korontana fa tsy tamin’ny nidirany teo am-pahatongavana izy ireo. Teo koa ny nahitana mpiasa iray, misahana ny arofenitry ny ben’ny Tanàna, nivezivezy mandeha fiara nefa avy eo miverina indray, nandritra ny famotorana. Ametrahan’ny maro ahiahy tanteraka avokoa izany rehetra izany.
Etsy andaniny, nilaza ireo mpahay lalana sy manamboninhaitra anivon’ny polisy sasantsasany fa azo heverina ny hiakaran’ ity raharaha ity eny anivon’ny fampanoavana
ambaratonga voalohany, ny asabotsy izao.
Ben’ny Tanàna Mapar
Araka izany, andrasana ny ho tohiny ka mba tena handeha hatramin’ny farany, ahitana na mitombina na tsia izany rehetra izany. Olon’ny Mapar rahateo ity ben’ny Tanàna ity. Efa nanambara ny mpitondra, indrindra ny filoha Rajaonarimampianina tamin’ity herinandro ity fa ho hentitra ny tenany momba ny volam-panjakana. Amin’ny ankapobeny, tsy ananana havana izany araka ny nambarany ary efa anisan’izany ireny « Raharaha Razaimamonjy Claudine » ireny. Mba tsy ho pimaso na resabe fotsiny na hakana fon’ny olona izany fa tanterahina ary tohizana hatramin’ny farany…